Shiinaha 1.5M qalooca Olimpic baarka warshad iyo alaableyda | Yunlingyu
Lambarka tusaalaha: YLY - CQG
Magaca badeecada 1.5M qalooca Olimpic bar
miisaanka miisaanka saafiga: 8.7kg
miisaanka guud: 9.2kg
kale dhexroor dhiibis: 2.5cm
dhererka dhiibida: 25cm
Dhexdhexaadinta haynta: 5cm
Dhererka sii haynta: 94.5
Cabbirka baakadka 160 * 10 * 10cm
Baararkayaga Olombikada waxay ku habboon yihiin inay kaa caawiyaan inaad kaamil ahaato foomkaaga adiga oo yareynaya culeyska gacantaada iyo xusulladaada. Kordhi guulahaaga oo aad beegsato jirkaaga sare si aad u dhisto xoog iyo murqaha. U adeegso curl, saxaafadda iyo jimicsiga kordhinta.
Halbeega caadiga ah ： Laga soo bilaabo baarka gogolka plate Saxanka barbell iyo haysa waxay ka kooban yihiin saddex qaybood. Tartamada caalamiga ah ee qaadista culeyska waa inay adeegsadaan bambaano heer caalami ah oo ay ansixiyeen xiriirka qaadista caalamiga ah. Waxaa jira laba nooc oo barbell ah oo loogu talagalay ragga iyo dumarka, waxa ugu weyn ee ay ku kala duwan yihiin waa barbell, taarikada baararka ayaa isku heer ah.
Baarka baararka ee ragga ayaa dhererkiisu yahay 2.20 mitir, culeyskiisuna waa 20 kiilo. Baarka haweenka ayaa dhererkiisu yahay 2.15 mitir, culeyskiisuna waa 15 kiilo. Baarka barafku wuxuu leeyahay dhexroor 0.028 mitir ah. Xaashida baararka ugu weyn waa dhexroor dhan 0,45 mitir. Daboolka cinjirka ayaa loo isticmaali karaa in lagu kordhiyo muuqaalka isla markaana loo yareeyo buuqa barbell.
Barbell waa nooc ka mid ah qalabka tababarka aasaasiga ah, Waxaa sidoo kale loo isticmaalaa qaadista culeyska. Jimicsiga Barbell waa nooc ka mid ah tababarka miisaanka. Kaliya adoo adeegsanaya barar, si loo hagaajiyo awoodda murqaha. Waxaad sidoo kale u adeegsan kartaa barbarka tababarka aasaasiga ah, kor u qaadida isuduwidda guud.
Barbellsku waxay leeyihiin adeegsiyo badan, haddii ay tahay garbahaaga, dhabarkaaga, gacmahaaga, laabtaada. Adoo ku garaacaya bararka iyo qaybaha birta ee culeysyada kaladuwan, isticmaal farsamooyin takhasus gaar ah u leh tababarka muruqyada dhowr jeer, samee tababarka adkeysiga muruqyada ee kooxda muruqyada oo dhan, samee baruur gubasho, u beddelo xariiq dherer leh.
Hore: Square tubbada sagxadda barxadda saxan trailer
Xiga: Daawaha birta guga ee 2.2M